Umaki: ezokuxhum roi | Martech Zone
Maka: ezokuxhum roi
Njengoba abathengisi nezinkundla zokuxhumana zivuthwa, sithola okuningi okuningi mayelana nokubhekela phansi nokuphazamiseka kokutshala imali ezinkundleni zokuxhumana. Uzobona ukuthi ngivame ukugxeka okulindelwe okubekwe ngabaluleki bezokuxhumana - kepha lokho akusho ukuthi ngiyayigxeka imithombo yezokuxhumana. Ngonga amathani esikhathi nomzamo ngokwabelana ngokuhlakanipha nontanga futhi ngixoxa nemikhiqizo eku-inthanethi. Angingabazi ukuthi isikhathi sami esichithwe ezinkundleni zokuxhumana sinakho
Ukukhula Kokukhangisa Kwemidiya Yezenhlalo kanye Nomthelela Wayo Ekumakethweni Kwedijithali
NgeSonto, ngoJulayi 15, i-2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Abathengisi kudingeke ukuthi bashintshe cishe zonke izici zezindlela zabo zokukhangisa ukuze bahambisane nokuziphatha kwabathengi kanye nezindlela zobuchwepheshe. Le infographic, Indlela I-Social Media Ewushintshe Ngayo Umdlalo Wesikhangiso kusuka Ekukhangisweni kwe-MDG, inikeza ezinye zezinto ezibalulekile ezishayelayo futhi ezinomthelela ekuguqukeleni ekubukezweni kwezokuxhumana. Ngesikhathi ukukhangisa ezinkundleni zokuxhumana kufika okokuqala endaweni yesehlakalo, abathengisi bayisebenzisela ukuxhumana kalula nezethameli zabo. Kodwa-ke, abathengisi banamuhla kuye kwadingeka bashintshe abaningi
ULwesihlanu, May 18, 2018 Douglas Karr
Izolo ebusuku ngibe nethuba eliyisimanga lokuya kubo bobabili ukuhlangana ngilalele ophumelele kathathu i-Indianapolis 500, uHelio Castroneves. Bengiyisimenywa somqeqeshi obambisene futhi osebenza naye uDavid Gorsage, obuze ukuthi ngizohlinzeka ngezibuyekezo zezokuxhumana kuwo wonke umcimbi. Ngenkathi ngihlela ama-hashtag, ngilandela abaxhasi, futhi ngazi ama-VIP asekamelweni, uchwepheshe othile wezomjaho wathembela kuye wabuza: Ungumxhumanisi wezokuxhumana ngempela? I-